ईश्वर नमान्ने प्रचण्डद्वारा पूजा र आरती ! | Nagarik News - Nepal Republic Media
काम्रेड प्रचण्डले गलेश्वर बाबाको विधिवत् पूजा र आरतीसमेत गरे। यो पूजा उनले आफ्नी श्रीमती र सहयोद्धा सीतादेवीको सुस्वास्थका लागि गरेको भन्ठानेको छु। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कहिलेदेखि यस्ता मूर्तिपूजामा विश्वास गर्न थाले थाहा छैन र सार्वजनिक भएको जस्तो पनि लाग्दैन। माक्र्सवाद र मूर्तिपूजा कति संगत छ, कति अन्तर्निहित छ, कति अनुबन्धित छ र कति छ गलेश्वर बाबाको शिलापूजा, आरती र सीतादेवी दहालको गम्भीर बिरामी अवस्थाको तादात्म्य एवं तारतम्य ? त्यो पनि थाहा छैन। कां. प्रचण्डले गरेको बाबाको पूजा र आरतीको निहीतार्थ के हो थाहा छैन, साँच्चै भन्नुपर्दा। तर कहिलेकाहीँ यस्ता अनियमित आकस्मिकता उभिन आइपुग्छन्, जसबाट अकस्मात् छटपटी लाग्न थाल्छ, हुटहुटी हुन थाल्छ। यो त्यही छटपटी तथा हुटहुटीको परिणाम हो। गलेश्वर महादेवको पूजा गर्दा, आरती गर्दा उनको अनुहारमा जुन दयनीयता र भावातीतता देखेँ साँच्चै भावुक भएँ म पनि। उनी (प्रचण्ड) पार्टीको काममा हो कि सीतादेवीको स्वास्थ्य लाभका लागि तातोपानीमा उष्ण स्नानका लागि गएका हुन्, म्याग्दी ? त्यो पनि थाहा छैन औपचारिक रूपमा। जे भए पनि म सीतादेवी दाहालको स्वास्थ्य तुरुन्तै राम्रो होस्, सामान्य बनोस् र तन्दुरुस्त होस् भन्ने कामना गर्छु।
पुनःस्थापित संसदमा माओवादीहरू पनि प्रवेश गर्ने भए। त्यसपछि २०६३ माघ १ गते माओवादीबाट ८३ जना संसदमा थपिए, ३२८ सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद बन्यो। २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने र सरकारको नाम पनि नेपाल सरकार रहने, सेनाको नाम नेपाली सेना हुने र सेना परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेजस्ता घोषणा ग¥यो। २०६३ चैत १८ गतेदेखि माओवादी पार्टी सरकारमा पनि प्रवेश ग¥यो। प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराइ सरकारमा गएनन्। २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भो। माओवादी पार्टी सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी भयो। कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन्। संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्र उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भो। २०६५ भदौ ६ गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्दा शपथ लिने समारोह वा अन्य कुनै पनि समारोहमा टोपी लगाएको, दौरा सुरुवाल लगाएको देखिएन। यहाँसम्म कि शपथको वाक्यको ‘ईश्वर साक्षी राखी’ भन्ने अंशसमेत उच्चारण गरेनन्। तर अहिले आएर तिनै प्रचण्ड गलेश्वर बाबाको पूजा र आरती गर्नेसम्म भए। समयको चक्रले कस्तो मान्छेलाई कस्तो बनाउँदोरहेछ भन्ने उदाहरण दिन खोजेको मात्र हुँ।
प्रकाशित: १ असार २०७६ ०८:३५ आइतबार
शपथ प्रचण्ड पूजा ईश्वर